Xasaradda Ukraine: Arrimihii Putin u sahlay in uu saaxiib la noqdo Mareykanka kaddibna ka guuleysto. | HADHWADAAG NEWS
War Cusub: “Beesha Caalamka waxaanu Sheegaynaa…” Madaxda Ururka Miisaan
Halgamayaashii SNM ee Gobolka Togdheer oo Hanjabaado Culus hawada u mariyay…
“Labada xisbi mucaarad waxaan leeyahay waa la tartamayaa Ninkastaaba wixii uu…
Deg Deg: 4 Xubnood oo kamida Gudiga Diiwaangelinta Ururrada Siyaasadda Oo…
Abwaan Cabdi Cali Maggan iyo Maansadii (Xadays ) ee uu kaga…
Somaliland Presidency Awarded No-Bid Contract with Inflated Cost to Redesign and…
Qaramada Middoobay oo ka digtay masiibo kusoo fool leh 20 milyan…
Dowlada Mareykanka oo iska fogeysay arrin muran dhalisay oo ay sameysay…
Twin Cities Somali community raises funds after devastating Somaliland fire.
Deg Deg: Maxaa Sababay In lagu kala kaco Shirkii Caawa ka…
Maxay Iska Shabahaan Madaxweyne Biixi Iyo Ismail Omar Geele?…W/Q:-Qalinkii Aqoonyahan Cabdirasaaq…
“Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay waar horumarka noogu duceeya” Guddoomiyaha Guurtida.
Telesom iyo Maalmaha Fasaxa ee Qaranka Somaliland Maxaa Kala Haysta?….W/Q:-Axmed Jamac
“Kulmiye Oo Uf Wada Yidhina Xuska 18ka May Anigu Waan Usoo…
Home English News Xasaradda Ukraine: Arrimihii Putin u sahlay in uu saaxiib la noqdo Mareykanka...
Xasaradda Ukraine: Arrimihii Putin u sahlay in uu saaxiib la noqdo Mareykanka kaddibna ka guuleysto.
Nairobi(HNN):-Madaxweyneyaashii Mareykanka ee isbaddalayay waxay caqabad kala kulmeen in ay fahmaan miisaanka Vladimir Putin, balse hadda oo ay xarig jiidka kusoo biireen xukuumadaha Brussels iyo Berlin oo awood badan wata, sheekadu waxay noqon doontaa mid ka duwan sidii hore, sida uu qoray Nick Bryant.
Inta badan way sahlan tahay in Vladimir Putin loo arko inuu yahay dhilqaha kunka sano, isagoo muuqaal bani’aadan leh, dilaana ah.
Madaxweynaha Ruushka waxa uu awoodda qabsaday 31-kii bishii December ee sanadkii 1999-kii, xilli dunida oo dhan laga dhowrayay in ay saacaddu is baddasho oo la galo qarniga cusub ee ka billaabanayay 2000.
Labaatankii sano ee xigtay, Putin waxa uu isku dayayay inuu dunida ka hagaajiyo hannaanka ay ku socotay ee cilladeysnaa, oo ah burburinta nidaamka caalamiga ah ee xorta ah.
Ninkan oo horay uga tirsanaan jiray hay’adda sirdoonka ruushka ee KGB waxa uu doonayay inuu waqtiga saacadda dib u celiyo, uuna soo nooleeyo Ruushkii mar jiri jiray xilligii uu ahaa Midowgii Soviet-ka ka hor inta uusan kala burburin 1991-kii.
Isagoo damaciisu yahay soo celinta dhulkii la kumay, waxa uu noqday hoggaamiyihii ugu dhibka badnaa ee soo maray qarniga 21-aad, waxa uuna mas’uul ka ahaa xaalado badan oo jah wareer ku dhisan laga soo billaabo Chechnya ilaa Crimea, laga billaabo Suuriya ilaa magaalo diimeedka Salisbury.
Waxa uu raadinayay – mararka qaarna ku guuleystay – in uu wax ka baddalo qariidadda qaaradda Yurub.
Waxa uu isku dayay – mararka qaarna ku guuleystay – inuu isku dhex yaaciyo howsha Qaramada Midoobay. Waxaa ka go’neyd – oo mararka qaarna uu ku guuleystay – inuu daciifiyo Mareykanka, uuna ka faa’iideysto kala qaybsanaantiisa iyo hoos u dhiciisa.
Putin waxa uu madaxweyne noqday xilli ay Reer Galbeedku kalsooni weyn isku qabeen. Mareykanka ayaa ahaa awoodda kaliya ee caalamka oo dhan laga baqi jiray.
Ciidan salaan sharaf siinaya diyaaradda madaxweynaha Mareykanka ee Air Force One oo ku degtay Moscow 2002
Maalmihii ugu horreeyay, gaar ahaan, Putin wuxuu Reer Galbeedka tusay in uu la dhacsan yahay sida ay wax u wadaan, sida ay rabaana uu u fikirayo – arrintaas oo hadda ay caddahay inuu ka watay qorshe uu taariikhda waji cusub ugu yeelayay, hase ahaatee dad badan ayaa ku dhintay inta ay howshaas socotay.
Madaxweyneyaashii Mareykanka ee is baddalayay ayaa sameeyay ficillo ka careysiiyay. Bill Clinton, oo ahaa madaxweynihii Mareykanka ee Aqalka Cad joogay markii uu Putin xilka qabtay, ayaa ku dhaqaaqay tallaabo uu isbahaysiga Nato ugu fidinayay dalalka xuduudda la wadaaga Ruushka.
George F Kennan, oo ah qoraagii caanka ahaa ee u dhashay Mareykanka, ee diiwaan geliyay istiraatiijiyaddii Mareykanka ee Dagaalkii Qaboobaa, ayaa xilligaas ka digay: “In ballaarinta Nato ay noqon doonto khaladka ugu weyn ee uu Mareykanku sameeyo markii laga soo baxay Dagaalkii Qaboobaa kaddib.”
Qoraalka sawirka, Bill Clinton waxa uu xoogga saaray in la ballaariyo Nato, arrintaas oo dadka qaar ay ku tilmaameen khalad
George W Bush waxa uu si gebi ahaanba khalad ah u fahmay dhigiisa Ruushka.
Oraah caan baxday ayuu hadda ka hor Bush yidhi mar uu Putin kula kulmay Slovenia, 2001-dii, taasoo ahayd: “Indhaha ayaan ka eegay ninka, waxaana ogaaday in uu yahay nin waddo toosan loogu imaan karo oo la aamini karo… waxaa ii suutagashay inaan fahmo naftiisa gudaha ku jirta.”
Bush waxa uu si khaldan ugu maleynayay in uu horumar la sameyn karo Putin, waddada dimuqraaddiyaddana uu kusoo celin karo.
Balse, inkastoo xitaa Bush uu Ruushka ku tagay booqashooyin ka badan kuwii uu ku tagay dalalka kale – oo ay ka mid ahaayeen, labo safar oo uu shakhsi ahaan u go’aansaday oo uu ku tagay sanadkii 2002-dii magaalada uu Putin kaso jeedo ee St Petersburg – hoggaamiyaha Ruushku wuxuu intaas ku howlanaa inuu fuliyo qorsheyaashiisa khatarta badan.
2008-dii, oo ahaa sanadkii ugu dambeeyay ee madaxweynenimada Bush, Putin waxa uu farogelin militeri ku sameeyay Georgia – tallaabadaas oo uu ku tilmaamay “howlgal ku saabsan higelinta nabadda”.
Madaxtooyada Kremlin waxa ay xilligaas ku doodday – ilaa haddana ku doodeysaa – in ay gardarro tahay haddii Washington ay cabasho ka keento ku xad gudubka sharciga caalamiga ah kaddib wixii ka dambeeyay markii uu Bush xoog ku qabsaday dalka Ciraaq.
Barack Obama ayaa isku dayay in uu dib u habeeyo xiriirka Mareykanka iyo Ruushka. Wasiirkiisii ugu horreeyay ee Arrimaha Dibadda, Hillary Clinton, waxa ay xitaa dhiggeeda Ruushka, Sergey Lavrov, gacanta u galisay batoon loogu talogalay dib u sixidda (kaasoo si khaldan loola mid dhigay eray Ruush ah oo micnihiisu yahay “buux dhaafay”).
Balse Putin waxa uu ogaa in America, oo ay ku daba dheeraadeen dagaalladii ay ku qaadday Afghanistan iyo Ciraaq, aysan mar kale rabin inay boolis u noqoto caalamka.
Markii uu Obama diiday inuu 2013-kii digniintiisa xariiqinta cas u adeegsado Bashar al-Assad, markii uu kali-taliyaha Suriya hubka kiimikada ah u adeegsaday shacabkiisa, Putin waxa uu arkay calaamad fasaxeysa isaga.
Waxa uu Assad ku garab istaagay dagaalka dhimashada badan sababayay, isagoo u fidiyay awoodda ay Ruushku ku leeyihiin Bariga Dhexe, markaas oo Mareykanku ay doonayeen in ay kasii jeestaan gobolka.
Sanadkii xigay, Putin waxa uu qaatay Crimea, oo ahaa gobol nidaamsan oo ka tirsanaa bariga Ukraine.
Inkastoo Obama uu ku yidhi “iska gooso,” Putin waxa uu xitaa isku dayay in uu farogeliyo doorashadii madaxtinnimada Mareykanka ee dhacday 2016-kii, isagoo rajeynayay in laga guuleysto Hillary Clinton, oo muddo dheer fahansaneyd qorshihiisa, uuna guuleysto Donald Trump oo waligiisba la dhacsanaan jiray Ruushka.
Taajirka kasoo jeeda New York marna ma uusan qarsanin sida uu u xiiseeyo Putin, taasoo dad badan ay u arkeen inay sii xoojisay rabitaanka ku jira madaxweynaha Ruushka.
Moscow waxay sii faraxday markii uu Trump dhaleeceeyay Nato, isagoo daciifiyay isbahaysigii Mareykanka ee dagaalka kaddib la abuuray, waxa uuna noqday hoggaamiye taageero badan heysta oo America ka dhigay mid siyaasad ahaan u kala qaybsan oo kala qaybsanaanteeduna ay gaadhay heerkii ugu sarreeyay wixii ka dambeeyay markii laga baxay Dagaalkii Sokeeye.
Previous articleAkhri: Nuxurka Heshiis dhexmaray xukuumadda Somaliland iyo Qaar ka mida Ganacsatada.
Next articleIsmaandhaaf Ka Taagan Maalmihii ugu Danbeeyey Kastamka Cashuuraha Kalabaydh iyo Xaalada Ka Taagan.
Halgamayaashii SNM ee Gobolka Togdheer oo Hanjabaado Culus hawada u mariyay Madaxweyne Biixi & Maxamed Kaahin
“Labada xisbi mucaarad waxaan leeyahay waa la tartamayaa Ninkastaaba wixii uu hayo…” Guddoomiyaha Ururka Asaas
Halgamayaashii SNM ee Gobolka Togdheer oo Hanjabaado Culus hawada u mariyay...
“Labada xisbi mucaarad waxaan leeyahay waa la tartamayaa Ninkastaaba wixii uu...
Deg Deg: 4 Xubnood oo kamida Gudiga Diiwaangelinta Ururrada Siyaasadda Oo...
Abwaan Cabdi Cali Maggan iyo Maansadii (Xadays ) ee uu kaga...
Xildhibaan Si Xun u Karbaashay Hogaanka Sare ee Dalka + Arrimo...
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta Si rasmiya Xilkii ula wareegay..
Shacabka Gobolka Gabiley Ayaa Si Adag Uga Hadlay Xadhiga Muwaadinka ku...
Muwaadin Aarre Saleebaan Cawleed Oo Maanta La Horgeeyey Maxkamada Degmada ...
“jin Dayoobay ayaa Hogaanka inoo haya”.. Xildhibaan Koodbuur Oo Ka Hadlay...
Maxkamada Gobolka Maroodijeex Oo Saaka Xukuno Kala Duwan Ku Riday 4...
Gacan Ka Hadal Saaka ka Dhacay Golaha Wakiilada Somaliland iyo Bilowga...